"Badbaadiyey gambaleelka" ayaa Zack ku soo celinaya maamulka gobolka California - dadka - WAA KU DUWAN
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE "Badbaadiyey gambaleelka" ayaa Zack ku soo celinaya maamulka gobolka California - dadka
"Badbaadiyey gambaleelka" ayaa Zack ku soo celinaya maamulka gobolka California - dadka
Isagu waa manipulator qurux badan, manipulator xariif ah - gabdhaha oo dhami way jeclaayeen. Wuxuu damacsanaa inuu noqdo gudoomiyaha gobolka California.
Maya, kama hadlayno Gavin Newsom halkan, laakiin waxa ku saabsan khayaaliga Zack Morris ee caannimada "Saved the Bell."
Tiffani-Amber Thiessen sida Kelly iyo Mark-Paul Gosselaar sida Zack oo ah sawir qaade oo aan loo baahnayn oo loogu magac daray sitooska caruurta "Waxaa badbaadiyey Bell." (NBC)
Bilowga dib u soo celinta caanka ah ee Teen sitcom ee dabayaaqadii 1980 iyo horraantii 90 sanadood wuxuu ku salaysnaan doonaa fikradda ah in Zack, oo lagu sharaxay Mark-Paul Gosselaar, hadda yahay ninka mas'uul ka ah gobolka dahabiga ah.
sida ay Hollywood Reporter Zack wuxuu gaaraa go'aano is khilaafsan oo u horseedaya in la xiro dugsiyo badan oo dakhligoodu hooseeyo. guud ahaan gobolka, ku qasbay ardayda ku jirta iskuulladaan inay u guuraan dugsiyo badan oo hodan ah, oo ay ku jiraan Bayside High, Zack's alma mater.
Caruurta asal kala duwan ka soo jeeda ayaa garbaha iska dumaya; waxay ku dhamaan kartaa si xun - sida "West Side Story" ama "The outsiders", laakiin waxaan u maleyneynaa in shaqaalaysiinta ay soo bixi doonto cashar cusubna lagu baran doono dhamaadka qeyb kasta.
qayb ka mid ah baaxadda adeegga NBCUniversal ee adeegga qulqulka cusub, Peacock.
Waxaa wali la arki doonaa inta Gosselaar uu ku soo bixi doono taxanaha tan iyo markii uu jilaa sidoo kale soo bandhigi doono filimka soo socda ee '' Mixed-ish '' ABC, waana fal ka soo baxa '' Black-ish. '' Laakiin Mario Lopez iyo Elizabeth Berkley waa inay dib u bilaabaan kaalintooda AC Slater iyo Jessie Spano, markan waalid ahaan.
Adeegga qulqulka, sida uu sheegayo Hollywood Reporter, wuxuu wadaxaajood la galayaa xeerar kale oo ah showgii ugu horreeyay ee soo noqda. Xubnaha kale ee muhiimka ah ee bandhigga waxaa ka mid ahaa Tiffani-Amber Thiessen (oo ciyaaray Kelly Kapowski), Lark Voorhies (Lisa Turtle) iyo Dustin Diamond (Screech Powers). Sida Gosselaar, Thiessen wuxuu ka shaqeynayaa mashruuc kale, "Alexa & Katie" oo ka socda Netflix
Asalka "Waxa Badbaadiyay Gong" ayaa laga sii daayay 1989 ilaa 1993 subaxnimadii Sabtida. Tani waxay horseeday kacdoonkii "Badbaadiyay Bell: Sannadaha Kuleejka" (1993-1994) iyo "Badbaadiyay Bell: Fasalka Cusub" (1993-2000).
Peacock, oo la bilaabi doono bisha Abril sidoo kale wuxuu bilaabi doonaa "Battlestar Galactica" iyo "Punky Brewster."
Waxaad ku riyaaqday sheekadan? Read faallo badan oo ku saabsan madadaalada Cicero Estrella halkan oo raadso wararka kale ee ku saabsan dadka caanka ah .
PHOTOS. Carla Bruni iyo Naomi Campbell waxay la kulmaan saaxiibbada bandhiga Burberry
PHOTOS. Kendall Jenner si isdaba joog ah ayey isu beddelaysaa muuqaalka iyo dillaacyada ubaxa
Mohamed Salah ayaa seegi doona kulamada Masar - VIDEO
India: koox qareeno ah ayaa u soo bandhigay koobi xukunkii CP ee Ram Lalla | Wararka Hindiya
7 Noofambar 30 20h2019 Wargeys - VIDEO
Esp: Bale dan kama laha Real Madrid, Zidane wuxuu liqaa abeeso - FOOT 01
Walaasheed Kate, Pippa, ayaa dhalaalaysa iyadoo ay xaday boorsada walaasheeda fiidkii galabta
DADKA & LIFESTYLE7,787
Video dheeraad ah3,593